Phezulu kwiCreek A-Frame Cottage - I-Airbnb
Phezulu kwiCreek A-Frame Cottage
Ukuphumla ukubaleka i-A-Frame Cottage enendawo yokuhamba ejonge kwichibi le-trout eligcweleyo elijikelezwe yimithi. Yonwabela iihektare ezingama-20 zeendlela zokuhamba onokuhamba ngazo, ukutyibilika ekhephini okanye isihlangu sekhephu. Ukuloba echibini okanye kwi-Blyth Creek 300 iinyawo kude. Gcoba ngesitovu somthi kwaye ubukele ikhephu liwa emva kosuku kwindalo. Iphenyane, i-kayak okanye ukuqubha echibini ngexesha lentwasahlobo, ihlobo okanye ekwindla. Ikhitshi egcwele ngokupheleleyo, i-BBQ, isitovu seenkuni, indawo yokucima umlilo kunye negumbi lokuhlambela eli-3. Iinkuni kunye neelinen zinikezelwe.
Ubusika bufikile. Jabulela ukusetyenziswa kwezicathulo zekhephu kwiindlela ezintle. Kukho iipere ezi-2 zezihlangu zekhephu ezinokusetyenziswa ziindwendwe zethu. Iindledlana zikukhokelela emahlathini ecaleni komlambo. Relax ngelixa ubukele iintaka, ukubona okutsha nje kwe-Bald Eagle, i-Red-tailed Hawk kunye ne-Snow Owl.
4.97 · Izimvo eziyi-188
Ujikelezwe yimithi phakathi kweehektare ezingama-20 zeendlela awuzukuba nayo inkampani ngaphandle kokuba ubamemile. Sivumela iindwendwe zethu ukuba zibenenkampani kwaye zonwabele ukuhlala kwazo nabahlobo kunye nosapho.
We are a family of 5 living on a beautiful country property. To the back of our property surrounded by trees is a relaxing get away Cottage that we share with our guest.
I-Cottage inayo yonke into umntu anokuyidinga ukuze aphumle kamnandi elizweni kodwa ukuba kukho nantoni na umntu anokuyidinga nditsalela umnxeba okanye i-sms kuphela.